China Wall-yakakwira Yinyitong yekuzvigadzirira sevhisi vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Quotation - Shenzhen JAK Medical Technology Co, Ltd.
Imba > Sirivha vanachiremba Sirivha vanachiremba > Rusvingo-rwakatasva Yinyitong yekuzvishandira-yega terminal
Iwo madziro-akaisirwa yinyitong yekuzvishandira-wega terminal inotsigira yega-sevhisi recharge, kugadzwa, kunyoreswa, kubhadhara, runyorwa kudhinda, invoice kudhinda uye yekuongorora mushumo kudhinda.
madziro-akaiswa yinyitong self-sevhisi yekupedzisira,inotsigira yega-sevhisi recharge, kugadzwa, kunyoreswa, kubhadhara, runyorwa kudhinda, invoice kudhinda uye yekuongorora mushumo kudhinda.
Seyakazara yekuzvishandira-yega terminal, JAK-800H inogona kuve yakagadzirirwa kusvika padanho repamusoro, isingawanzo muindasitiri.SDP-7E inosanganisa kumeso kuzivikanwa basa, inogona kupa varwere recharge, kugadzwa, kunyoreswa, kubhadhara, kudhinda runyorwa uye zvimwe zvisiri. -diagnosis uye zvekurapa zvinhu, batsira varwere kuti vakurumidze kupedzisa kuzvibatsira, kupfupisa nguva yekumirira yevarwere mune isiri-yekuziva uye yekurapa chinongedzo, uye nekunyatso kugadzirisa kunaka kwechipatara kurapwa basa.
1. Chigadzirwa chimwe chete chinogona kubatsira varwere kupedzisa akawanda asiri ekuongorora uye maitiro ekurapa vari vega, uye chimiro, ma module anoshanda uye UI interface inogona kugadziridzwa.
1. Kadhi rekurapa / Yemagariro Kadhi kunyoresa
2. Kugadzwa kwekunyoresa / kunyoresa
3. Tarisa / purinda runyorwa rwemazuva echipatara
4. Alipay kubhadhara, WeChat kubhadhara, kubhadhara nekadhi rekurapa / rezvekuchengetedza kadhi,
5. Barcode kuongorora
6, nguva switch switch
7. Kubvunzurudza chimiro chechipatara
8. Vanachiremba 'kugutsikana ongororo
9. Inzwi rinokurumidza basa
Hot Tags: Yekurapa firimuedMedical printerï¼ŒWall-yakakwira Yinyitong yekuzvishandira-wega chinamira, China, vagadziri, vatengesi, fekitori, yakagadzirirwa, mutengo, chitaurwa.